Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Tia mandehandeha? Te hihinana? Maninona i Portugal no tokony ho ao anaty lisitry ny siny
Miroborobo ny sehatry ny gastronomy any Portugal miaraka amin'ny sehatry ny sakafo miala amin'ny aloky an'i Espana amin'ny farany. Na dia mangalatra ny limel ho toeram-pivarotana sakafo aza i Espana mpifanolo-bodirindrina aminy, i Portugal dia tsy tokony holavina.
Vao haingana i Michelin no nanome trano fisakafoanana 3 any Portugal miaraka amin'ny kintana voalohany. Ny firenena izao dia mirehareha trano fisakafoanana 20 misy kintana iray, ary kintana 6 misy kintana 2, mampiseho fa mahandro sakafo miavaka no aroso any amin'ny trano fisakafoanana manerana ny firenena.
Mba hanomezana tsiro ny mpizaha ny mahandro gourmet ao amin'ny firenena, ny kaompaniam-pirenena TAP Air Portugal dia nanolotra programa "Taste the Star" izay nanamboaran'ny chef kintana Michelin ny nahandro miavaka eo an-toerana izay natolotr'ireo mpandeha kilasy asa.
Fotoana hitsidihana izao satria ny toerana mahandro sakafo mahandro tsara indrindra dia lasa toerana mafana fizahan-tany. Ny sasany amin'ireo safidy sakafo faran'izay tsara eto amin'ny firenena dia misy ny sakafo manandrana codfish tena tsara ao Aveiro ka hatrany amin'ny tsakitsaky Portiogey mahazatra, fantatra amin'ny anarana hoe petiscos, ao Alentejo.
Ny sakafo Portiogey dia miankina amin'ny sary masina 5. Voalohany, ny trondro tsara indrindra eto an-tany raha ny hevitry ny mpahandro iraisam-pirenena malaza maro. Ny toeram-ponenany sy ny toerana misy azy manokana ao amin'ny Atlantika dia manome ny trondro fepetra tsy manam-paharoa amin'ny fahaterahana sy ny fitomboana izay ahafahan'izy ireo mahazo tsiro sy firafitra mafy hifanaraka amin'ny toeran-kafa.
Ny faharoa dia ny cataplana, fitaovana iray izay mahafinaritra ny gourmets sy ireo izay tia mampifangaro ny fahatsapana rehetra manodidina ny latabatra. Cataplana no teny ilazana ny lovia fisakafoanana sy ny vilany spherical izay nandrahoina ary naroso. Ity henan-kisoa sy hazandranomasina ity dia hita ao amin'ny Algarve any Portugal.
Ny kisary fahatelo amin'ny nahandro Portiogey dia ny divay Port, izay heverina ho fatratra sy manintona. Ny mampiavaka azy dia avy amin'ny tany, ny asa mafy ataon'ny olona, ​​ary ny tara-masoandro izay masaka ny voankazo. Ity faritra ity dia nosokajian'ny UNESCO ho toy ny vakoka lova manerantany, ary koa ny Lodges any Gaia izay anton'ireo divay ireo.
Manaraka izany ny zava-mamy avy amin'ny sakafo Portiogey, ary masina izy ireo. Tamin'ny andro taloha, ny masera dia manomana ny fomba fahandro azy amin'ny siramamy, atody ary amandy amin'ny fitokanan'ireo katolika. Ny valin'ny fifandanjana eo amin'ny tsiro sy ny crème ary ny crispiness dia sary famantarana iray hafa amin'ny sakafo Portiogey, heverina ho mamy any an-danitra tokoa - ny pastel de nata (custard tart).
Ny kisary fahadimy amin'ny sakafo Portiogey dia miorina amin'ny toetran'ny olombelona. Ny chef ao amin'ny firenena dia manan-talenta ary mahazo loka bebe kokoa, manova ny harena amin'ny sakafo Portiogey amin'ny famoronana, ny fahasahiany ary ny tsiro mahafinaritra. Amin'izao fotoana izao, i Portugal dia mirehareha manana mpahandro maro be izay miasa amin'ny sakafo avo indrindra, mampiasa fomba fahandro efa taloha na fomba tsy mahazatra izay manatsara ny tsiro sy ny kalitaon'ny vokatra eo an-toerana.
Miaraka amin'ireo sary famantarana sakafo ara-kolotsaina ireo, dia misy vokatra maromaro hafa izay manampy amin'ny fanavahana izay nohanina any Portugal. The Protected Denomination of Origin (DOP) hena avy amin'ny karazany eo an-toerana - kisoa Bísaro sy kisoa mainty, Arouquesa, Maronesa, Mertolenga, Barrosã ary Lafões henan'omby, zanak'ondry Barroso (charnequeiro sy transmontano), Terrincho ary Bragançano zanak'ondry - izay miasa mafy ny mpamokatra mba hitazomana ny succulence sy tsiro.
Ny voankazo sy legioma vaovao no fototry ny nahandro Portiogey sy ny toetrany mediteraneanina bebe kokoa, mahazatra ny sakafo mahasalama, tsotra ary maro karazana. Izy ireo dia vokatry ny tany mahavokatra, izay mandray ny fizotry ny famokarana biolojika vaovao izay sariaka ho an'ny mpanjifa sy ny tontolo iainana.
Ho an'ny zava-manitra, misy menaka oliva manitra madio izay mandresy ny tsena iraisam-pirenena isan'andro. Ny trondro, lasopy, salady ary fromazy dia efa zatra azy avokoa.
Ary, gaga - misy fromazy mahafinaritra any an-tendrombohitra novokarina tany Portugal izay mbola tsy hitan'izao tontolo izao. Ny fromazy sy osy ary ondry marikivy, menaka, na maina, dia hahatonga ny sakafo ho fitahian'ny lanitra.
Trano fisakafoanana Meia Tigela any Portugal
Mba hiaraha-miasa amin'izany rehetra izany, misy tsiambaratelo mahafinaritra iray hafa izay vao manomboka havoaka - divay latabatra tena tsara. Namboarina avy amina taranaka mpamokatra divay sy mpamokatra divay vaovao manana vina vaovao amin'ny fambolena voaloboka, divay portogey no tena zava-pisotro miaraka amin'ny sakafo misy kalitao tsara araky ny faritry ny firenena izay fisakafoanao.
Izao fotsiny no mila ataon'ireo mpandeha misakafo sakafo dia ny manomana ny dianao, ary rehefa tonga ianao dia mipetraha amin'ny latabatra ary mankafy ny sakafo sy ny divay rehefa mankafy ny traikefa nahafinaritra nataonao.
Dia Italia: fanokafana harena miafina hafahafa amin'izao tontolo izao